छोराको साथीसँग मनसँगै शरीर पनि मिलेपछि ...
scheduleमगलवार जेष्ठ ८ गते, २०७५
छोराको साथीसँग मनसँगै शरीर पनि मिलेपछि …
एजेन्सी, १९ मंसिर । कहिलेकाँही प्रेम असाध्यै अराजक बनिदिन्छ । मर्यादाका चिनियाँ पर्खालहरु भत्काइदिन्छ अनि पुष्टि गरिदिन्छ कि प्रेम अन्धो हुन्छ भनेर ।
यस्तै भयो अमेरिकामा पनि । लिसा नाम गरेकी एक अमेरिका महिलाले आफ्नो १७ वर्षीया छोराका १४ वर्षीय साथीसँग रमाइलो सम्बन्ध बनाइन् । सुरुमा छोरासँग आउँदा चिनजान भएको उनीसँग बिस्तारै लिसाको प्रेम सम्बन्ध झांगिन थाल्यो । प्रेम शारीरिक सम्बन्ध र शारीरिक सम्बन्धले विवाहसम्म छलाङ मार्न भ्यायो ।
३७ वर्षीया लिसा श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर बसेकी थिइन् । एक्लो छोराको जिम्मा लिएर बसेकी उनको घरमा छोराको साथी खेल्न आइरहन्थे । जब छोरा घर नभएको बेला छोराको साथी आइपुगे, लिसाको मन रंगीन बन्न थाल्यो ।
उनी निकै प्रेमिल बनेर प्रस्तुत भइन् । उनको प्रेम बिक्यो र केटा पनि साथीकी आमासँग आकर्षित भए । उमेरमा आफूभन्दा २३ वर्ष कान्छो बालकसँग उनको प्रेम झांगिदै विवाहसम्म पुग्यो किनकी शारीरिक सम्पर्कबाट उनी गर्भवती बनिसकेकी थिइन् ।
प्रेमले अनुशासन तोडे पनि कानुनले तोड्दैन । त्यहाँको कानुनले विवाह गर्न १५ वर्ष उमेर पुग्नैपर्ने व्यवस्था गरेकोले लिसाले विवाहको लागि एक वर्ष कुरिन् । विवाहपछिको रोचक अवस्था तपाईंले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ? आफूभन्दा कान्छो साथीको छोरा बनेका छन् लिसाका छोरा । उनले आफूभन्दा कान्छो साथीलाई अब बाबु भनेर बोलाउनुपर्ने भएको छ ।
६३ वर्षदेखि प्रतिबन्धित त्यो गीत जसलाई सुन्ने हरकोहीले गर्थे आत्महत्या
सैनिकले माछालाई यसरी बनाए नेभी मिसनको खतरनाक जासुस
यस्तो छ दुबईका सडकमा फेला पर्ने वेवारिसे कारको तथ्य
ककपिट द्वार टुटेपछि कोपाइलट विमान बाहिर
जसले पाँच वर्षमै पहिलो सन्तान जन्माईन….
तीस वर्षिया मोडेल जसले बाँचिरेका छन् आधा महिला आधा पुरुष जीवन
केटीले नै मन्जुर नगरेपछि बालविवाह रोकियो !
५५० वर्ष पुरानो जीवित भिक्षु
५६ दिनमा शरीरभन्दा ८६ हजार गुणा बढी खाना खपत गर्छ रेशम किरा
नासा वैज्ञानिक बनेर साढे एक करोड ठग्ने यी बाबु छोरा
शारीरिक सम्बन्ध राखेर आफ्नै छोरासँग विवाह गर्ने कलियुगकी आमा
मृत्यूपछि शरीरमा के हुन्छ ? यी हुन् मृत शरीरमा हुने रोचक परिवर्तनहरु
इजरायलमा जापानी प्रधानमन्त्रीलाई जुत्तामा खाना दिइएपछि…..
राजा तूतेनखामेनको तीन हजार वर्ष पुरानो चिहानबारे आश्चर्यजनक खुलासा
यसकारण यहाँ ट्रेनभित्रै पढ्छन् विद्यार्थी
जेलको सुरक्षार्थ खटिएकी महिला प्रहरी नै खुंखार कैदीसँग प्रेममा परेपछि…..
दिनेश कुमारः १७ वर्षदेखि सडक कोरेर पुरा गर्दैछन् शाेखको पत्रकारिता
श्रीमानलाई यातना दिने श्रीमतीमाथि ५० हजार जरिवाना
अब नदीहरुमा बाढी आउनुभन्दा तीन दिन अगावै पूर्व-जानकारी पाईने
भोटखोलावासीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न पाँच दिन पैदल हिंड्नुपर्ने
मृत्युको अनुभव लिन पाहुना जान्छन् यो होटल
काठमाडौं, ८ जेठ । नीति तथा कार्यक्रमपछि सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको छ । स्थायी सरकारको पहिलो बजेट भएकोले यस बजेटलाई धेरैले...
विश्वकपका लागि अर्जेन्टिनाको अन्तिम २३ खेलाडीको सुची सार्वजनिक
एजेन्सी, ८ जेठ । नजिकिँदै गरेको फिफा विश्वकपको लागि अर्जेन्टिनाले आफ्नो अन्तिम टोलीको घोषणा गरेको छ । विश्वकपको लागि अर्जेन्टिना...
प्रहरीसहित १३ हजार कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा, अधिकांश शिक्षक
काठमाडौं, ७ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ हजार कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने भएको छ । सम्पती विवरण नबुझाउने १३...
आफ्नै पिताले गरे १२ बर्षीया छोरीको बलात्कार !
काठमाडौँ, ८ जेठ । ईलाममा १ जना निर्दयी बाबुले आफ्नै १२ बर्षीया छोरीको बलात्कार गरेका छन् । ईलाम नगरपालिका ९ गोलखर्कका ३० बर्षिय...
यस्तो छ ‘कम्युनिष्ट सरकार’को नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं, ७ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद् (राष्ट्रिय...
लियोनल मेस्सीका कारण खुसी छन् अर्जेन्टिनी प्रशिक्षक साम्पाओली
एजेन्सी, ८ जेठ । बार्सिलोना तथा अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सी शारिरीक र मानसिक रुपमा रसियामा हुने विश्वकपका लागि...
नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणविरोधी सात जना थुनामुक्त
काठमाडौँ, ७ जेठ । सर्वोच्च अदालतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण आउनुभन्दा अगाडि पक्राउ परेका सात जनालाई...
नेपाल प्रहरीमा विचौलियाको हाबी
काठमाडौँ, ८ जेठ । आईजीपी बढुवामा भएको चरम चलखेलका कारण प्रहरीको कमाण्ड विचौलियाको हातमा पुग्ने खतरा बढेको छ । प्रहरी सरुवामा...